FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLHUAHUA FRANTSAY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullhuahua frantsay
Chihuahua / French Bulldog Mix Dogs
'Herman dia Bullhuahua frantsay, aseho eto amin'ny tokony ho 1 taona. Taranaky ny madio izy Chihuahua Neny sy ny olon-drehetra Bulldog frantsay dada Amin'ny ankapobeny, Herman dia be fitiavana sy tsy mivadika amboa lap . Izy dia alika mora be eo amin'ny manodidina, tena mandanjalanja. Tsy dia mikasoka loatra izy ary amin'ny ankapobeny dia mety te hilalao tady, hitsako Nylabone, na handry eo am-pofoan'ny olona iray. Tiany koa mandehandeha, manodidina ny 30 minitra indray mandeha isan'andro , ary mitaingina ny fiara.
'Ny iray amin'ireo olana niarahako tamin'i Herman dia ny aretin-koditra. Mbola tsy fantatro ny antony, fa ny fanomezana an'i Herman Benadryl 25mg amin'ny alina dia sady manampy ny mangidihidy no manampy azy hiala sasatra.
'Namaky ny boky' Pack Leader 'an'i Cesar aho ary nampihatra ny ankamaroany mba hampiofanana an'i Herman nanomboka ny 8 herinandro. Ankehitriny, herintaona mahery taty aoriana dia tsara fitondran-tena i Herman ary tsy mampiseho fampiratiana olan'ny fitaintainanana , herisetra, na toetra manjaka . Mino tanteraka ny teôlôjia momba ny fampiharana sy ny fifehezana ary ny fitiavana aho amin'ny fampiofanana sy ny fananana alika mahay mandanjalanja. '
Ny alika Bullhuahua frantsay dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Bulldog frantsay . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
ICA = Fikambanan'ny Canine Iraisam-pirenena
American Canine Hybrid Club = Bullhuahua frantsay
Designer Dogs Kennel Club = Bullhuahua frantsay
Fikambanan'ny amina kaninina iraisam-pirenena = Bullhuahua frantsay
Mpanoratra International Canine Registry®= Frenchie meksikana
Herman the French Bullhuahua, aseho eto toy ny alika kely 8 herinandro
Fanny the Frenchie meksikana (alika mifangaro mix Chihuahua / French Bulldog)
Fanny the Frenchie meksikana amin'ny maha alika alika azy (Chihuahua / French Bulldog mix breed)
Liam the Frenchie meksikana rehefa olon-dehibe ary alika alika kely (Chihuahua / French Bulldog mix breed)
Pebbles the Mexico Frenchie toy ny alika kely (Chihuahua / French Bulldog mix breed)
Alika kely Frenchie meksikana vao teraka (Chihuahua / French Bulldog mix breed)
'Ity no brindle French Bullhuahua nantsoina hoe Stich tamin'ny faha-7 taonany. Ny reniny dia purebred Bulldog frantsay (mainty / borosy) ary ny popany dia purebred Chihuahua (fotsy). Amin'ny fako dia fotsy avokoa ireo izay misy pentina mainty afa-tsy ny ahy. Nisy 5 TERAKA fivaviana miaraka amin'ny 4 sisa velona. Ankizy kely roa dia lehibe loatra ka tsy afaka mivoaka C-section maika . Mampalahelo fa tsy tafavoaka. Nahita ny pups tsirairay aho ary samy hafa ny fisehony sy ny habeny. Stich dia nitovy indrindra tamin'ny Bulldog frantsay fony izy mbola kely nefa niova kely. Tena miavaka izy ary resaka momba ny valan-javaboary rehefa isika mandeha mitsangatsangana . '
Stich ilay alika kely Bullhuahua frantsay vao herinandro vitsivitsy monja (Chihuahua / French Bulldog mix breed)
Fangaro mix French Bulldog / Chihuahua amin'ny 7 herinandro
Jereo ny ohatra bebe kokoa momba ny Bullhuahua frantsay
Sary Bullhuahua frantsay 1
Lisitry ny Alika Hybrid Chihuahua
rhodesian ridgeback mpiandry ondry Zavatra Mix alika kely
sary iray rhodesian ridgeback
ny fomba taloha be no mahazo sheepdogs anglisy
labozia antsasaky ny pitbull antsasany
king charles sy mix poodle